GalMudug oo sheegtey in ay soo weerareen Puntland iyo Mareykanka. | Baydhabo Online
GalMudug oo sheegtey in ay soo weerareen Puntland iyo Mareykanka.
In kabadan 20 askari ayaa lagu dilay weerar saaka waaberigii lagu qaaday xero ku taallo duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo fariisin u ah ciidamada Galmudug, sidaa waxa BBC-da u xaqiijiyay wasiirka amninga Galmudug, Cismaan Ciise Nuur oo loo yaqaan Taardhuleed.
Weerarkan waxaa qaaday ayuu yiri ciidammada PS-ka loo yaqaan ee Puntland oo ay taageerayaan diyaarado Maraykanku leeyihiin, waxaanu intaa ku daray in afar baabuur oo ka mid ahaa gaadiidkii ciidanka Galmudug ee saldhiggaa ku sugnaa lagu gubay weerarkaas.
Wasiirka oo ka jawaabayay inuu caddayn u hayo in weerarkan ay qaadeen ciidamada Puntland iyo kuwa Maraykanku, ayaa wuxu sheegay in la ogyahay in ay ciidammada PS-ka la ogyahay in Maraykanku tababaro isla markaana ay sheegi karaan noocii diyaaradihii duqaynta gaystay iyo madaafiicdii ay ridayeen.
Waxaanu intaa ku daray in weerankan ay sabab u tahay “warar khaldan” oo la siiyay Maraykanka. Wasiirku wuxu ugu baaqay ciidamada Maraykanka inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan arintan.
Dhanka kale, maamulka Puntland oo ay BBC-du la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdadan.